Fangatahana Visa Indiana | India Visa Application | India Visa Online
Inona no fampiharana India Visa?
Ny governemanta India dia mitaky ny teratany vahiny rehetra mitady fidirana any India, manolotra Fangatahana Visa any India. Ity fizotry ny fametrahana fisoratana anarana ity dia azo atao amin'ny alàlan'ny fitsidihana ara-batana ny masoivohon'i India na amin'ny famitana ny Fangatahana India Visa an-tserasera amin'ity tranokala ity.
Ny Application India Visa dia ny fanombohan'ny dingana ahazoana valiny amin'ny fanapahan-kevitra India Visa. Ny fanapahan-kevitra Visa Indiana Visa amin'ny ankamaroan'ny tranga dia ankasitrahan'ny mpangataka.
Iza no mila hamita ny India Visa Application?
Ireo mpitsidika izay tonga any India ho mpitsidika, na ho an'ny tanjona ara-barotra na fitsaboana fitsaboana dia afaka manolotra ary fampiharana Visa Indiana amin'ny Internet ary hoheverina ho fidirana ao India. Ny famenoana ny fampiharana Visa India dia tsy manome fidirana ho azy any India.
Ny manampahefana momba ny fifindra-monina notendren'ny Governemanta Inde dia nanapa-kevitra ny vokatry ny fampiharana Visa India Viaorina amin'ny fampahalalana nataon'ny mpangataka sy ny taratasim-panadihadihana anatiny.
Mpizaha tany India tonga eo ambanin'ny 1 amin'ny Visa Type voalaza eto mila mamita ny fampiharana Visa India.
Fampiharana Indiana Visa Indiana an-tserasera na eVisa India azo alaina amin'ireto sokajy midadasika ireto:
Visa any Etazonia eTourist
Visa amin'ny visa any India
Visa eMedical any India
Visa manatrika eMedical India
Inona no fampahalalana takiana ao amin'ny fampiharana India Visa?
Io endrika io dia somary mahitsy sy mora vita amin'ny minitra vitsy. Misy fampahalalana takiana amin'ireo mpangataka amin'ireto sokajy lehibe ireto:
Ny antsipiriany biografia momba ilay dia.
Ny antsipirian'ny fifandraisana.
Ny antsipirian'ny pasipaoro.
Tanjona amin'ny fitsidihana.
Tantaran'ny mpanao heloka bevava taloha.
Ilaina ny antsipiriany fanampiny miankina amin'ny karazana visa.
Sarin-tarehy sy pasika pasipaoro angatahina aorian'ny nanaovana ny fandoavana.
Rahoviana aho no tokony hamita ny Fangatahana India Visa?
Tokony hamita ny fangatahana Visa Indiana farafahakeliny 4 andro alohan'ny hidiranao any India ianao. Visa ho an'i India dia afaka maharitra 3 ka hatramin'ny 4 andro hahazoana fankatoavana, noho izany dia tsara ny mampihatra 4 andro fiasana alohan'ny hidirana ao India.
Hafiriana no mety hamitana ny Fangatahana Visa Indiana?
Raiso ny fampiharana Visa India 3-5 minitra hamitana alohan'ny hanaovana fandoavam-bola amin'ny Internet. Rehefa vita ny fandoavam-bola, miankina amin'ny zom-pirenen'ny mpangataka sy ny tanjon'ny Fitsidihana, dia mety hangatahana fampahalalana fanampiny ilay mpangataka.
Ity fampahalalana fanampiny ity dia vita amin'ny 2-3 minitra. Raha misy olana amin'ny famitana ny fampiharana an-tserasera dia azonao atao ny mifandray amin'ny Help Desk sy ny ekipan'ny Customer Support amin'ity tranokala ity amin'ny fampiasana ny Mifandraisa aminay rohy.
Inona avy ireo fepetra takiana alohan'ny fametrahana ny fampiharana India Visa an-tserasera?
a) Fitakiana pasipaoro na zom-pirenena:
Tsy maintsy anisan'ny 1 amin'ny firenena mahay avelan'ny Governemanta Inde ho tonga izany eVisa India mety.
b) Fepetra ilaina:
Ny fepetra takiana hafa amin'ny famitana ny fampiharana Visa India an-tserasera dia ho avy amin'ny tanjona 1 amin'ireto:
Nitsidika ny tanjon'ny fizahantany, Fianakaviana sy namana akaiky, fandaharana yoga, fahitana maso, asa an-tsitrapo fohy.
Fivahinianana fitsangatsanganana sy fivarotana ara-barotra, varotra sy fividianana entana na serivisy, fitarihana fitsangatsanganana, fanatrehana fivoriana, fivarotana fivarotana, seminera, fihaonambe na asa hafa momba ny indostria, varotra.
Fitsaboana fitsaboana samirery na mihetsika amin'ny maha-mpitsabo anao ho an'ny olona marary.
c) Ireo fiomanana mialoha:
Fepetra ilaina alohan'ny hamita ny fampiharana an-tserasera India Visa dia:
Pasipaoro iray manan-kery mandritra ny 6 volana amin'ny vanim-potoana hidirana ao India.
Pasipaoro misy 2 pejy tsy misy na inona na inona mba ahafahan'ny tompon'andraikitry ny fifindra-monina manisy fitomboka izany eny amin'ny seranam-piaramanidina. Mariho, fa ny Visa India natolotra taorian'ny famenoana ny Application Visa India an-tserasera dia tsy mitaky anao hitsidika ny masoivoho Indiana amin'ny fametrahana hajia Visa. 2 pejy banga dia takiana ao amin'ny seranam-piaramanidina mba hidirana sy hivoahana amin'ny pasipaoronao.
Adiresy mail mailaka.
Fomba fandoavam-bola toy ny fisavana, karatra debit, carte de crédit na Paypal.
Afaka mametraka vondrona na fianakaviana India Visa Application ve aho?
India Visa Application, na eo aza ny fomba nahavitany, na an-tserasera na any amin'ny masoivoho Indiana, dia mila hatsangana ho an'ny olona tsirairay misaraka na firy taona. Tsy misy tarika ampiasain'ny Indian Visa Application misy amin'ny fomba an-tserasera na ivelany.
Aza adino raha mila mangataka ny olona tsirairay amin'ny pasipaorony ianao, noho izany dia ny zaza vao teraka dia tsy afaka mandeha eny amin'ny pasipaoron'ny ray aman-dreniny na mpiambina azy.
Inona no mitranga rehefa vita ny fampiharana Visa Indiana?
Rehefa nalefa ny fampiharana Visa Indiana dia efa niatrika ny fanodinana tao amin'ny tranoben'ny Governemanta India. Ny mpitsangatsangana dia mety hametraka fanontaniana fanampiny na hazavaina momba ny diany na mety hamoaka Visa Indiana tsy misy fanazavana fanampiny.
Ny sasany amin'ireo fanontaniana mahazatra anontaniana dia mifandraika amin'ny tanjon'ny dia, toeram-ponenana, hotely na reference any India.
Inona no maha samihafa ny India Visa Online Application sy Paper Application?
Tsy misy maha samy hafa ny 2 fomba afa-tsy ny fahasamihafana kely.
Indiana Visa Application Online dia tsy maharitra mandritra ny 180 andro fotsiny.
India Visa Application Online napetraka ho an'ny Tourist Visa dia maharitra 5 taona.
Ekena amin'ny Internet Visa Application Online no avela ho amin'ireto tanjona manaraka ireto:
Manatrika Program yoga / e ianao.
Tonga amin'ny fitsaboana ara-pitsaboana ianao na miaraka amin'ny marary izay manao fitsaboana.
Raha tsy 1 amin'ireo voalaza etsy ambony ireo ny tanjon'ny dianao dia tokony hametraka taratasy miorina amin'ny fangatahana Visa Indiana mahazatra ianao izay dingana mandreraka sy maharitra.
Inona avy ireo tombontsoa amin'ny famitana ny fampiharana Visa Indiana an-tserasera?
Ny tombotsoan'ny fampiharana Visa Indiana an-tserasera dia ireto manaraka ireto:
Visa dia alefa amin'ny mailaka elektronika, noho izany ny anarana eVisa (Visa elektronika).
Misy fanazavana fanampiny sy fanontaniana apetraka amin'ny mailaka ary tsy mitaky resadresaka any amin'ny Masoivoho Indiana na Consulate.
Haingana kokoa ny dingana vita ary vita amin'ny ankamaroan'ny tranga ao anatin'ny 72 ora.
Mila mitsidika ny masoivoho Indiana ve ianao rehefa vita ny fampiharana Visa any India amin'ny Internet?
Tsia, tsy takiana ianao hitsidika ny masoivoho indianina na ny vaomiera avo lenta taorian'ny nahavitan'ny fangatahana indianina Visa an-tserasera.
Ny Visa elektronika elektronika homena anao, dia hosoratana ao anaty rafitra informatika. Ilainao ny mitazona kopia malefaka amin'ny telefaona na raha toa ka maty ny bateria findainao, dia mendrika ny mitazona pirinty an-tsoratra an'ny Visa elektronika elektronika na eVisa India. Afaka mandeha eny amin'ny seranam-piaramanidina ianao rehefa avy mahazo eVisa Indiana.
Ahoana ny fomba fandoavam-bola amin'ny fampiharana Indiana Visa an-tserasera?
Misy vola mihoatra ny 133 ekena ao amin'ity tranokala ity. Afaka mandoa an-tserasera ianao, na amin'ny alàlan'ny fizahana any amin'ny firenena sasany, amin'ny carte de debit, carte de crédit na Paypal.
Rahoviana ianao no TSY mila mangataka fampiharana Visa Indiana amin'ny Internet?
Inona avy ny fetran'ny fangatahana India Visa an-tserasera?
Raha mahafeno fepetra amin'ny India eVisa i India ary nanapa-kevitra ny hameno amin'ny Internet Visa Application Online, dia mila fantatrao ny fetra.
Visa Indiana izay hatolotra anao rehefa vita ny fampiharana India Visa an-tserasera na ny fampiharana eVisa India dia tsy misy afa-tsy 3 maharitra ho an'ny tanjona fizahan-tany, 30 andro, 1 taona ary 5 taona.
Ny fampiharana an-tserasera India Visa vita amin'ny Internet dia hanome anao Visa ho an'ny India ho an'ny India izay maharitra mandritra ny 1 taona sy fidirana marobe.
Visa ara-pitsaboana azo amin'ny alàlan'ny Indian Visa Application Online na eVisa India dia misy mandritra ny 60 andro ho an'ny tanjona ara-pitsaboana. Izy io dia mamela fidirana 3 mankany India.
India Visa Application Online izay manome anao eVisa indiana, avela handeha fantsona fidirana seranana amin'ny seranana, seranam-piaramanidina 28 ary seranan-tsambo 5. Raha mikasa ny hitsidika an'i India an-dalana ianao, dia tsy tokony hangataka visa ho any India mampiasa ity tranonkala ity amin'ny alàlan'ny fomba fiasa India Visa Application online.
eVisa India nahazo tamin'ny famenoana ny fampiharana Visa Indiana amin'ny Internet dia tsy mendrika hitsidika faritra i cantonment miaramila. Mila mangataka ny Fahazoan-dàlana Miaro sy / na Fahazoan-dàlana voafetra ianao.
Visa elektronika ho an'i India no fomba haingana indrindra hidirana any India raha mikasa ny hitsidika an-tsambo na fiaramanidina ianao. Raha anisan'ny firenena 1 amin'ny 180 ianao izay mendrika ny eVisa India ary mifanaraka amin'ny tanjona voalaza etsy ambony, dia azonao atao ny mangataka India Visa an-tserasera amin'ity tranokala ity.